TLD ဆိုတာဘာလဲ ထိပ်တန်းအဆင့်ဒိုမိန်းများရှင်းလင်းချက် | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, နိုဝင်ဘာလ 20, 2016 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
သင်သည်မည်သည့်ဒိုမိန်းအမည်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလျှင်၊ top-level ဒိုမိန်း နောက်ဆုံးအစက်၏နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် domain name တစ်ခု၏အဆင့်ဆင့်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် ချစ်တယ်, အ TLD is .com.
ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ဝက်ဘ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်သောအခါဒိုမိန်းအမည်များကိုမှတ်မိရန်လွယ်ကူသည်။ .com ဆိုလိုတာကခင်ဗျားကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာရှိနေတယ်။ .org ဆိုလိုတာကမင်းဟာအကျိုးအမြတ်မယူတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရောက်နေတယ်၊ .edu ဆိုလိုတာကမင်းဟာတက္ကသိုလ် (သို့) ကျောင်းနေရာမှာရှိနေတယ်၊ .net ဆိုလိုတာကခင်ဗျားဟာကွန်ရက်တစ်ခုပေါ်မှာရှိနေတယ်၊ .mil ဆိုလိုတာကခင်ဗျားဟာစစ်တပ်ဆင်ရေးနေရာမှာရှိနေတယ် .gov ဆိုလိုတာကသင်ဟာအစိုးရ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှာရှိနေတယ်။ .com, .net နှင့် .org အတွက်ဒိုမိန်းအမည်ကိုကန့်သတ်ချက်မရှိပဲမှတ်ပုံတင်နိုင်သည်၊ သို့သော်အခြားသူများသည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်။
TLD များကို ICANN မှအတည်ပြုပြီးရောင်းသည်။
ICANN ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှပါ ၀ င်သူများနှင့်အင်တာနက်ကိုလုံခြုံမှုရှိစေရန်၊ တည်ငြိမ်စေရန်နှင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု၍ ရနိုင်စေရန်အကျိုးအမြတ်မယူသောအများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်၏ထူးခြားသောအမှတ်အသားပေါ်လစီများပေါ်ပေါက်စေသည်။ ၄ င်းသည်အင်တာနက်၏အမည်ပေးခြင်းစနစ်၏ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအခန်းကဏ္အားဖြင့်၎င်းသည်အင်တာနက်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းအပေါ်အရေးကြီးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် TLD အသစ် ၁၃၀၀ ကိုအသုံးပြုရန်နှင့်များသောအားဖြင့်အများပြည်သူထံရောင်းချရန်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးစာရင်းတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရှုရန်၊ အမြစ်ဇုန်ဒေတာဘေ့စကဲ့သို့သော gTLDs အပါအဝင်ထိပ်တန်းအဆင့်ဒိုမိန်းများအားလုံးကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် .comနှင့်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံကုတ်နံပါတ် TLD များ .uk.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် TLD တွေအကြောင်းမင်းသိချင်တာအားလုံးဒီမှာ Hosting အချက်အလက်.
Tags: ဒိုမိန်းtldtop level ဒိုမိန်း
လက်လီရောင်းချသူများသည် Text Messaging ဖြင့်အတွေ့အကြုံတိုးတက်လာခြင်းနှင့်ဝင်ငွေခွန်မောင်းနှင်ခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်